२१ वर्षमै अर्बपति, को हुन् काइली ? « Drishti News
२१ वर्षमै अर्बपति, को हुन् काइली ?
काठमाडौं, २४ फागुन । रियालिटी स्टार काइली जेनर संसारकै सबैभन्दा सानो उमेरकी अर्बपति बनेकी छन् । २१ वर्षीया काइली कस्मेटिक कम्पनीकी मालिक हुन् । उनको कम्पनी ‘काइली कस्मेटिक्स’ ३६० मिलियन डलरमा बिक्री भएको छ ।
काइलीले तीन वर्षअघि सन् २०१६ मा आफ्नो कम्पनी सुरुवात गरेकी थिइन् । हालै कम्पनीको भेल्यू ९० करोड डलर भएको थियो । उनको नेटवर्कमा बढुवा भएपछि टिभी स्टिट्स र इन्डोर्समेन्टका कारण कम्पनीले मूल्य पाएको थियो । काइलीले यसअघिका कम उमेरका अर्बपति फेसबुकका संस्थापक मार्क जुकरबर्गलाई उछिनेका छन् । मार्क २३ वर्षको उमेरमा सबैभन्दा कम उमेरका अर्बपति बनेका थिए ।
काइली रियालिटी टिभी स्टार किम, कोल र कर्टनी कार्दशियनकी सौतली बहिनी हुन् । उनको कम्पनीको प्रोडक्ट एकदमै रुचाइएको छ । उनका ग्राहक अर्बपति र हलिउड स्टार्स छन् । काइलीको एक हजारभन्दा बढी स्टोर्स रहेको छ । फोब्र्स म्यागजिनको कभर पेजमा आएपछि काइली झनै चम्किएकी हुन् । उनले सन् २०१७ मा ट्रेविस स्कोटसँग विवाह गरेकी हुन् । उनको अहिले एक छोरी छन् ।
फोब्र्सले गएको मंगलबार २१५३ जनाको सूची सार्वजनिक गरेका थिए । उक्त सुचीमा सबैभन्दा धनी अमेजनका सीईओ जेफ बेजोस रहेका छन् । उनको कुल सम्पत्ति १३१ अर्ब डलर रहेको छ ।